Dhageyso: Somaliland oo sheegtay inuu la-yaab ku noqday hadalkii Deni | Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Somaliland oo sheegtay inuu la-yaab ku noqday hadalkii Deni
Dhageyso: Somaliland oo sheegtay inuu la-yaab ku noqday hadalkii Deni
Hargeysa (Caasimada Online) – Iyadoo dhawaan maamulka Puntland ay doorteyn Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi majaraha u qaban lahaa Shanta sano ee soo socoto ayaa waxaa durbadiiba soo baxaya eedeymo Somaliland ay u jeedinayso Puntland.
Madaxweynaha csusub ee maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wareysi uuu dhawaan siiyaay BBC-da ayuu ku sheegay dhulka ay ku dagaalayaan Somaliland iyo Puntland ay si sharci ah u leeyihiin Puntland.
Waxaa hadalkaasi ka jawaabay Somaliland oo iyana dhankeeda sheegtay in wax laga xumaado ay tahay in madaxweynaha cusub ee Puntland uu doonayo in coolada kala dhexeyso Somaliland uu sii huriyo.
“Waxaan is leheyn madaxweynaha cusub ee la doortay ee Puntland, wuu ka duwanyahay midkii hore, laakiin kama aynan fileyn in uu sidii midkii ka horeeyay uu isagana colaad u doonayo” sidaasi waxaa maanta magaalada Hargaysa ka sheegay wasiirka Biyaha Somaliland Saleemaan Cali Kore.
Waxa ay u muuqataa in weli wax xal ah aanan loo heynin dagaalada soo laablaabtay ee u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland.
Hoos ka dhageyso codka Saleemaan Cali Kore